Ifayile yam ingaphaya kokuphola. Lithini icebo lam lokugqibela? - DataNumen
Kutheni ezinye idatha zingafunyanwa?
Ukuba ifayile yakho igcwele zonke ii-zeros xa usebenzisa le ndlela ukuyihlola, emva koko akukho datha inokuphinda ifumaneke kwifayile yakho. Nangona kunjalo, musa ukothuka. Kusekho amathuba okuba ukubuyisa idatha yakho, ngolu hlobo lulandelayo:
Idiski / idrive apho ikhoyo ifayile yakho isenokuqulatha idatha enokuphinda ifumaneke. Kwezinye iintlobo zedatha, ezinje nge-Outlook okanye Outlook Express idatha, onokuyisebenzisa DataNumen Outlook Drive Recovery or DataNumen Outlook Express Drive Recovery ukuskena idiski / ukuqhuba kwaye ufumane idatha yakho kuyo. Olunye uhlobo lwedatha, njenge SQL Server Idatha yedatha, ungaqala wenze umfanekiso wediski okanye uqhube nayo DataNumen Disk Image, emva koko usebenzise DataNumen SQL Recovery ukuskena ifayile yomfanekiso kwaye ubuyisele idatha kuwe.
Nayiphi na idiski / idrayivu okanye imithombo yeendaba yokugcina oyikhuphele kwifayile yakho, okanye ifayile yakho ikhe yakho ngaphambili, inokuba nayo idatha oyifunayo. Ke unokusebenzisa indlela efanayo kwisisombululo 1 ukubuyisa idatha yakho.
Unako kwakhona Qhagamshelana nathi kwaye uchaze yonke inkqubo yenkcitho yedatha yakho ngokweenkcukacha. Siza kuhlalutya ityala lakho ngesandla kwaye ngononophelo ukubona ukuba asekhona amathuba okubuyisa idatha nangayo nayiphi na indlela engeyiyo eyesiqhelo.
ngaphaya kokuchacha, disk, disk umfanekiso, qhuba, ukuncamela Okokugqibela
Ukuhlaziywa ngoMeyi 14, 2021
Ujonga njani ukuba ifayile yam inokuphinda ibuye ngokwam?Ndifuna inqaku elingafumaneki kwimveliso yakho. Kwenziwe ntoni?